ခေတ်ရေစီး ဂီတ အနုပညာ
အကျိုးပြုသီချင်း ၊ ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက်ဆိုထားတဲ့သီချင်းလေးပါဆိုတဲ့ ဒေါင်းဝေ
Zawgyi အက်ိဳးျပဳသီခ်င္း ၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ဆုိထားတဲ့သီခ်င္းေလးပါဆုိတဲ့ ေဒါင္းေ၀ရဲ႕ ၿငိမ္းခ်မ္းပါေစသီခ်င္း “ကၽြန္ေတာ္ music video ဖန္တီးမယ္ ရုိက္ကူးေရးအျဖစ္ ဆင္ဆာတင္ရမယ္ ဥကၠဌကိုေျပာျပၿပီးေတာ့ရုိက္မယ္ အဆုိကဒ္ေတြပါမယ္ တုိင္းရင္းသားကေလးေတြပါမယ္ တခ်ိဳ႔photo ေတြယူသံုးမယ္ စစ္ေဘးဒုကၡ သည္ေတြေပါ့ တုိင္းရင္းသားPhoto ေလးေတြယူသံုးမယ္ …. ” #Media9 #ေဒါင္းေ၀ Unicode အကျိုးပြုသီချင်း ၊ ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက်ဆိုထားတဲ့သီချင်းလေးပါဆိုတဲ့ ဒေါင်းဝေရဲ့ ငြိမ်းချမ်းပါစေသီချင်း “ကျွန်တော် music video ဖန်တီးမယ် ရိုက်ကူးရေးအဖြစ် ဆင်ဆာတင်ရမယ် ဥက္ကဌကိုပြောပြပြီးတော့ရိုက်မယ် အဆိုကဒ်တွေပါမယ် တိုင်းရင်းသားကလေးတွေပါမယ် တချို့photo တွေယူသုံးမယ် စစ်ဘေးဒုက္ခ သည်တွေပေါ့ တိုင်းရင်းသားPhoto လေးတွေယူသုံးမယ် …. ” #Media9 #ဒေါင်းဝေ
ခေတ်ရေစီး ဂီတ သတင်း
၀န်ထမ်းလစာလေးနဲ့ နယ်ပွဲဆိုထားတာလေးတွေပေါင်းပြီး သီချင်းတွေလုပ်ရတာဆိုတဲ့ပြည့်ဖြိုး
August 12, 2020 August 12, 2020 media9Comment(0)
Zawgyi ကုမၸဏီ၀န္ထမ္းလစာေလးနဲ႔နယ္ပြဲဆုိထားတာေလးေတြေပါင္းၿပီး သီခ်င္းေတြလုပ္ရတာဆုိတဲ့ျပည့္ၿဖိဳး “ေငြေရးေၾကးေရးအခက္အခဲက နယ္ပြဲဆုိထားတာရွိတယ္ ကုမၸဏီ၀န္ထမ္းလည္းလုပ္တယ္ လခကိုစုတယ္ အဲ့လုိလုပ္ၿပီးမွ သီခ်င္းေလးေတြလုပ္ရတာပါ …..” ျပည့္ျဖိဳး (အဆုိေတာ္) #media9 #ျပည့္ၿဖိဳး Unicode ကုမ္ပဏီဝန်ထမ်းလစာလေးနဲ့နယ်ပွဲဆိုထားတာလေးတွေပေါင်းပြီး သီချင်းတွေလုပ်ရတာဆိုတဲ့ပြည့်ဖြိုး “ငွေရေးကြေးရေးအခက်အခဲက နယ်ပွဲဆိုထားတာရှိတယ် ကုမ္ပဏီဝန်ထမ်းလည်းလုပ်တယ် လခကိုစုတယ် အဲ့လိုလုပ်ပြီးမှ သီချင်းလေးတွေလုပ်ရတာပါ …..” ပြည့်ဖြိုး (အဆိုတော်) #media9 #ပြည့်ဖြိုး
ပညာရေးပြီးဆုံးပါကအဆိုတော်ဘက်ကိုသွားဖို့ပိုအားသန်တယ်ဆိုတဲ့ Htin Thit Sar
[Unicode] ပညာရေးပြီးဆုံးပါက အဆိုတော်ဘက်ကို သွားဖို့ ပိုအားသန်တယ်ဆိုတဲ့ ထင်သစ္စာ [Zawgyi] ပညာေရးၿပီးဆံုးပါက အဆိုေတာ္ဘက္ကို သြားဖို႔ ပိုအားသန္တယ္ဆိုတဲ့ ထင္သစၥာ
ခေတ်ရေစီး ဂီတ ဂီတ ဆယ်လီ ဖက်ရှင် လူမှုဘဝ အနုပညာ
[Unicode] အကုန်လုံးကအွန်လိုင်းကနေပြီးတော့သီချင်းသီချင်းတစ်ပုတ်ချင်းဆီပဲထွက်နေကြတယ်။ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းအာ့လိုပါပဲ။အခုနောက်ပိုင်းကအပလီကေးရှင်းတွေပေါ်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်အခွေထွက်တာနည်းလာပြီးတော့အဲဒိလိုနေရာမှာပဲသီချင်းတွေရောက်သွားတယ်။ [Zawgyi] အကုန္လံုးကအြန္လိုင္းကေနျပီးေတာ့သီခ်င္းသီခ်င္းတစ္ပုတ္ခ်င္းဆီပဲထြက္ေနျကတယ္။ကြ်န္ေတာ္ကိုယ္တိုင္လည္းအာ့လိုပါပဲ။အခုေနာက္ပိုင္းကအပလီေကးရွင္းေတြေပၚလာတဲ့အတြက္ေျကာင့္အေခြထြက္တာနည္းလာျပီးေတာ့အဲဒိလိုေနရာမွာပဲသီခ်င္းေတြေရာက္သြားတယ္။
ဂီတ ဆယ်လီ ဖက်ရှင်
သီချင်းတွဲလုပ်မယ်ဆိုတဲ့ Sein Linn Aroma နဲ့ Dr.Mya Wutt Yee
[Unicode] မမမြက အသံလည်းအရမ်းကောင်းတယ် ၊ အကလည်းတော်တယ်လို့ ပြောလိုက်တဲ့ စိန်လင်း ( Aroma ) ကိုယ်က အသံကောငးတယ် ၊ သီချင်းလည်းဆိုတတ်တယ်ဆိုတာ Fan တွေလည်း သိတယ်ဆိုတဲ့ ဒေါက်တာမြဝတ်ရည် [Zawgyi] မမျမက အသံလည္းအရမ္းေကာင္းတယ္ ၊ အကလည္းေတာ္တယ္လို႔ ေျပာလုိက္တဲ့ စိန္လင္း ( Aroma ) ကိုယ္က အသံေကာငးတယ္ ၊ သီခ်င္းလည္းဆိုတတ္တယ္ဆိုတာ Fan ေတြလည္း သိတယ္ဆိုတဲ့ ေဒါက္တာျမဝတ္ရည္
ဂီတ ဆယ်လီ ဗွီဒီယို ရုပ်ရှင်
အသက်အရွယ်နဲ့ လိုက်ဖက်တဲ့ဇာတ်ရုပ်တွေကိုပဲရွေးချယ်လာတဲ့ “ထွန်းထွန်း”
[Unicode] အခုချိန်ထိ အမေက တကောက်ကောက်လိုက်နေသေးတဲ့ ထွန်းထွန်းကတော့ အချစ်ရေးမှာ ချစ်တတ်ပေမယ့် အချစ်နဲ့မထိုက်တန်တဲ့သူတွေပဲ ဆုံစည်းနေဆဲဖြစ်တာကြောင့် လူပျိုကြီးဖြစ်သွားနိုင်တယ်လို့ ဆိုပါတယ် ။ [Zawgyi] အခုခ်ိန္ထိ အေမက တေကာက္ေကာက္လိုက္ေနေသးတဲ့ ထြန္းထြန္းကေတာ့ အခ်စ္ေရးမွာ ခ်စ္တတ္ေပမယ့္ အခ်စ္နဲ႔မထိုက္တန္တဲ့သူေတြပဲ ဆံုစည္းေနဆဲျဖစ္တာေၾကာင့္ လူပ်ိဳၾကီးျဖစ္သြားႏိုင္တယ္လို႔ ဆိုပါတယ္ ။
“အချုပ်အနှောင်မဲ့”သီချင်းနဲ့ နောက်ဆုံးဖျော်ဖြေခဲ့တဲ့ Novem Htoo နဲ့ EXTANT Band ရဲ့အကြမ်းစား Live Show အပိုင်း(၄)
April 8, 2019 media9Comment(0)
“အခ်ဳပ္အေႏွာင္မဲ့”သီခ်င္းနဲ႔ ေနာက္ဆံုးေဖ်ာ္ေျဖခဲ့တဲ့ Novem Htoo နဲ႔ EXTANT Band ရဲ႕အၾကမ္းစား Live Show အပိုင္း(၄)